10 Yemazuva Ano Matekinoroji Ari Kuwedzera Dhijitari Kushambadzira | Martech Zone
10 Yemazuva Ano Matekinoroji Ari Kuwedzera Dhijitari Kushambadzira
Chipiri, January 22, 2019 Chipiri, January 22, 2019 Douglas Karr
Dzimwe nguva izwi kukanganisa ine chirevo chisina kunaka. Ini handitende kuti kushambadzira kwedhijitari nhasi kuri kuvhiringidzwa nechero tekinoroji yazvino, ndinotenda iri kukwidziridzwa nayo.
Vashambadziri vanoshandura uye vanotora matekinoroji matsva vanokwanisa kugadzirisa, kuita, nekubatana netarisiro yavo nevatengi nenzira dzinonyanya kukosha. Mazuva echikwata uye ekuputika ari kuchinja shure kwedu sezvo masisitimu ari kuita nani pakuratidzira nekufungidzira hunhu hwevatengi nemabhizinesi.
Mubvunzo, hongu, ndewokuti zvichaitika munguva. Dhijitari chiteshi chakachipa-chinodhura zvekuti zviito zvisirizvo zviri kushungurudza zvakavanzika zvevatengi nekurovera kushambadza pamberi pavo kunyangwe vangave vari mukutenderera kana kwete. Ngatitarisirei kuti mamiriro ekutonga haanyanye uye makambani anogona kushanda kudzikisira kushungurudzwa kwavo vega. Ini handina tariro yekuti zvichaitika, zvakadaro.
Sekureva kweWorld Economic Forum, iwo mana akakosha madhiraivhira eiyi shanduko ndeyenhare yekusvika kuwedzera, gore komputa, Artificial Intelligence (AI), uye Internet-ye-Zvinhu (IoT). Nekudaro, iyo nyowani tech seBig Data uye Virtual Reality (VR) inofungidzirwa kuchinja iyo mamiriro zvakanyanya.
Aya matekinoroji matsva anotarisirwa zvakanyanya kuunza kubatana kwakawanda pasirese kuburikidza nema touchpoints akawanda, zvinoreva kuti hofori dzeinternet hadzichakwanise kudzora data revatengi zvakare. Zvinotonyanya kukosha, zvinobatsira vashambadziri kugadzira mamwe makwikwi akazara uye anotarisirwa mune ramangwana.
Spiralytics yakaisa pamwechete iyi inoshamisa infographic, Nyowani Tekinoroji Inokanganisa Kushambadzira KweDhijitari, izvo zvakadzama gumi ematekinoroji ari kukurumidza kuedza kwedu, uye nekuchinja iyo mamiriro ekushambadzira kwedigital.
Big Data - Cloud tekinoroji yakavhura masuo kune ese makuru uye madiki mabhizinesi kuunganidza hombe huwandu hwevatengi data, muchidimbu ichipa nzira kune hombe data. Makambani anhasi anoziva zvakawanda nezvevatengi kupfuura nakare kose, achivabatsira kuti vagadzire zvakaringana zvakanangwa uye zvakasarudzika kushambadzira.
Artificial Intelligence (AI) - kuziva nekufunga kunoiswa pamakomputa uye algorithmic maitiro anobata vimbiso yekuita nekukurumidza, kunyatsoita zvisarudzo zvekushambadzira uye fungidziro. Izvi zvichaburitsa kugona kweindasitiri yedu.
Machine Learning - dzakangwara vateereri chikamu uye analytics inogona kuitisa uye kuyedza mamirioni e data poindi kubatsira vashambadziri mukugadzirisa uye nekuvandudza yavo mishandirapamwe mune chaiyo-nguva.
Bots - Chatbots inzira isingadhuri uye inochinja-chinja yemakambani ekuvandudza sevhisi sezvo ivo vachikwanisa kupa mhinduro dzinoenderana nedata uye kutora zvikumbiro. Inogona kuve nyore kubatanidzwa muwebhusaiti, app, kana pasocial media chikuva, uye inogona kuunganidza ruzivo rwekushandisa munzira dzekutengesa.
Kutsvaga Kwezwi - software yezwi ikozvino iri kushandiswa kupfuura nakare kose kutsvaga, inosanganisira inenge 1/3 ye3.5 bhiriyoni yekutsvaga kweGoogle kunoitwa zuva nezuva. Shanduko iyi inogona kukwidziridza yakabhadharwa uye organic yekutsvaga nzira maitiro mune ramangwana.
Virtual Reality uye Augmented Reality - AR neVR vanopa visceral kuyedza-usati-iwe-utenge ruzivo rwevatengi, uchivabvumidza kuti vaongorore chigadzirwa, kuita nechiratidzo, uye kutenga panguva imwe chete-kunyange kuvaita kuti vapfuure nepakati penzvimbo uye nemanzwiro.
Indaneti-Yezvinhu (IoT) uye Wearables - Kuwedzera kwenhamba yezvigadzirwa zvakabatana kunoguma newebhu yezvinhu zvakabatanidzwa izvo vashambadziri vanogona kusunga kudzidza ruzivo rwevatengi, kusanganisira zvavanofarira nezvavasingadi.
Blockchain - Vatengesi vanogona kushandisa blockchain kuteedzera uye kuchengeta vateereri vachiita mukushambadzira.
Beacons - akatungamira musika mupedyo yekushambadzira tekinoroji, kuverenga kwe65% uye kurova kunze kweWiFi neNFC. Anosvika mamirioni gumi nemakumi mashanu emabhikoni anga achishandiswa kubva muna 14.5 uye anogona kurova mazana mana emamirioni anotarisirwa na2017.
5G - 5G yakawedzera masekondi, hukuru hukuru hwekutakura, uye danda-kugadzira uye kuteedzera kugona kunogona kuvandudza zvakanyanya kugona uye kugona, uye nekupa kusvika ka100 kubatanidza nekukurumidza kupfuura 4G ine latency nechinhu cheshanu.
Tags: chakagadzirwa njerebig databotsiottekinoroji yazvinoprogrammaticspiralyticsrakapotsa chokwadi
Maitiro ekuwedzera maApp Banners kune Yako Nhare mbozha
Dhirone Dhirivhari Iri Kuenda Kutora Pasina nguva?